Videos - Malagasy
Finonoana mety tsara - Ity zaza ity dia tena minono tsara- Rehefa misokatra tsara hisotro ny vavavy dia miato kely ny saokany, alohan’ny hanidiany ny vavany, izay no ahitana fa feno ronono ny vavany. Zaza 2 andro - Ity zaza hita eto ity dia vao teraka 40 ora teo aloha. Mipetaka amin’ny nono tsara ilay zaza. Ny saokany dia mikasika amin’ny nono tsara, fa ny orony dia misitaka kely amin’ny nono, ary ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony. Finonoana mety - Jereo ny paozain’ity zaza ity eo amin’ny nono. Ny saoka mipetaka amin’ny nono, fa ny orona tsy mikasika. Ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony.
Mitsetsitsetsitra - Ity zaza ity dia teraka 8 herinandro teo aloha ary zara raha misotro rehefa minono, dia dia hita aza tsindraindray fa miaoto kely ny saokany. Ny zaza minono toa izao dia mety mijanona eo amin’ny nono mandritra ny ora maro anefa tsy ampy ny ronono azony. Zaza vao 10 ora - Ity zaza ity dia vao teraka 10 ora teo aloha. Hita eto ny fipetahana amin’ny nono tsara. Ny saoka mipetaka amin’ny nono, fa ny orona tsy mikasika. Ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony. Somary miankina amin’ny reniny kely koa izy. Zaza 28 ora ampiana mandray nono - Mampiseho ny zaza mandray nono. Tsy lafatra, fa mety ihany. Tsy maheno marary ny ny reniny. Indroa vao tafandray nono tsara ilay zaza, fa tsy maninona; aleo tsy terena handray nono ny zaza raha tsy mety. Zaza ampian’ny reniny manomboka aty ambonin’ny nono ankavia, dia mandray nono - Rehefa tsy mbola mahay mandray nono na manda mandray nono tanteraka ny zaza, ity fomba ity dia manampy ny zaza hanaiky ny nono. Zaza 4 andro, aorian’ny notapahina ny lela miraikitra, ny nono potserina - Vao notapahina ny lela niraikitra ho an’ity zaza ity. Potserin’ny renininy arak any tokony ho izy ny nono. Miandry izy raha toa ka misotra na tsia ilay zaza (miato ny saoka)
Tsoingoina ny loha-nono hanoroana ny tsy fandraisana nono tsara - Raha mandray ny loha-nono fotsiny ny zaza dia tsy mahazo ronono firy. Rehefa mandray nono arak any tokony ho izy , mikoriana tsara ny nono. Fampidiriana Fanampiana mampinono - Mila fanampiana nono ity zaza ity. Ny fomba tsara indrindra handrasainy izany dia amin’ny fanampiana mampinono satria
Tsy mbola mandray nono, omena ratsantanana - Azo atao aloha ny manome ratsantanana ny zaza raha toa ka tsy mbola mandray nono izy. Marihana fa io fomba io dia atao hampitony ilay zaza sy hampitsetsitra azy tsara. Mahalana mihotra ny 60 segondra io. Misotro amin’ny kaopy - Mety solon’ny tavoahanginono tsara. Ilaina tokoa ity raha toa ka tsy mety mandray nono ny zaza. Marihana fa milelaka ny ronono amin’ny lelany ilay zaza. Tsy araraka ao anaty vavan’ny zaza ny ronono
Miolankolana sy misotina nono - Zaza efa lehibebe ity, 3 na 4-bolana eo ho ep, izay nihena ny abetsakin’ny nonon’ny reniny. Vakio ny fanazavana momba zaza mitombo lanja miadana rehefa avy nitombo malaky teo aloha, fa indrayndray mitranga ity fihenanan’ny nono ity. Fanapahana ny lela miraikitra - Fomba tsotra sy haingana izay mety mampisy fiovana be ny fahombiazan’ny fampinonoana. Ny fikarohana momba io fomba io dia mandresy lahatra. Lalandra tery mivadika mena - Ny lohanono’ity reny ity dia mivadika fotsy rehefa avy minono ilay zaza. Afaka kelikely dia mivadika mena ihany ilay izy. Subscribe to our Newsletter